Indawo yokuhlala kunye nokuzala kwakhona kweekhonkco | Ngeentlanzi
Indawo yokuhlala kunye nokuzala kwakhona kwe-conger eel
URosa Sanchez | | Intlanzi
El ukunxibelelana izipho, ngokwendawo ezihlala kuyo, a ukusasazwa okubanzi kakhulu, isuka kwinto engaphezulu kwemitha ubunzulu kwiindawo ezinamatye iye ngaphezulu kwewaka, ngaphaya kwethambeka lelizwekazi. Kuyabonakala ukuba abantu ababhinqileyo banokufikelela kubunzulu obukhulu kunamadoda.
Abo ii-conger eels ezinendawo yazo yokuhlala kunxweme olunamatye zihlala zifihliwe emingxunyeni yazo emini kwaye ziyasebenza ebusuku xa zizingela. Ukutya ii-cephalopods, ii-crustaceans kunye neentlanzi.
El I-conger eel yintlanzi ethi phambi kombukeli ingathethi uloyiko nangona kuye kwakho uhlaselo olwenziwe yinto ethile ekhazimlayo. Kwiindawo apho iindidi zihlala zihlala khona, ziqhelana nobukho bomntu kwaye zinokutya kwisandla sokuphambuka.
Ukuhanjiswa kwayo kukho kuwo onke amanxweme asepeninsular. KwiAtlantiki, isuka eNorway iye kunxweme lwaseSenegal. KwiMeditera iqhelekile kuwo onke amanxweme nakwisiqingatha sentshona yoLwandle oluMnyama.
La Ukuzaliswa kwe-eel ngexesha elinye, njengoko emva koko engafanelekanga ngokukhawuleza kwaye esweleka. Yenza ukufuduka okungaphezulu okanye okuncinci ukuvelisa kwakhona, ngokuthe tyaba nangokuma nkqo, kuba ukuzala kwenzeka kubunzulu obubalulekileyo, njenge-800 yeemitha, ukuba sithetha ngentla-ntshona yeMeditera.
Abafazi banako lUkubeka amaqanda aphakathi kwesithathu nesi-3 samaqanda, kunye nokukhula ukusuka ekukhutshweni ukuya kwifomu yolutsha kuhamba ngamanqanaba aliqela abandakanya ubungakanani obahlukeneyo kunye neemilo, i i-semilarva, emhlophe nebala, imitha ukuya kwi-15 cm; i ileptocephalus (ifana kakhulu nee-eels kodwa zinkulu) inombala oqhelekileyo kunye nemilinganiselo ye-13 cm. Inkqubo ye- ulutsha, esele iveza umzimba wesilinda, imilinganiselo ye-8 cm ubude. Xa sele uzinzile, ukhula ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Indawo yokuhlala kunye nokuzala kwakhona kwe-conger eel
Iminqweno yentlanzi yaseBetta okanye yokulwa neentlanzi zikaSiam
I-Tremielga okanye i-torpedo fish